Ungayithola kanjani i-smartphone yakho ye-Android uma uyilahlile noma yebiwe | Izindaba zamagajethi
Ungayithola kanjani i-smartphone yakho ye-Android uma ilahlekile noma intshontshiwe
Kulezi zikhathi, ukulahlekelwa ngumakhalekhukhwini wethu ngohlelo olusebenzayo kungaba yinhlekelele, lapho-ke singabeka khona ikhambi. Uma kwenzeka ukuthi esikhundleni sokulahlekelwa yidivayisi yethu bantshontshe idivayisi yethu, singaba nethuba lokuthola isela sibonga kule ndatshana esizochaza ngayo ngokuningiliziwe ungayithola kanjani i-smartphone yakho uma ilahlekile noma intshontshiwe.
Ngalokhu kufanele sazi ukuthi kunoma iyiphi ikhompyutha singathola idivayisi yethu ye-Android, ngenxa yokuvumelanisa iGoogle ekwenza. Ngokuya ku-Isiphathi Sedivayisi ye-Android bese usebenzisa Imenyu Yezilungiselelo ze-akhawunti yakho ye-giant eseshwe, uzokwazi ukuthola idivayisi yakho.
Vele, ungakhathazeki, ngoba manje sithole kuphela ukuthi singakwenza kanjani futhi manje sizokuchaza isinyathelo ngesinyathelo ukuthi sikwenze kanjani.
1 Kufanele uvumelanise i-akhawunti yakho ye-Google nedivayisi yakho
2 Finyelela iwebhusayithi yeSiphathi Sedivayisi ye-Android
3 Ukugcina indawo isebenza ku-smartphone yakho kungakusiza
4 Ezinye izinketho ezithakazelisa kakhulu
5 Enye inketho; thola i-smartphone yakho kusuka ku-akhawunti yakho yakwa-Google
Kufanele uvumelanise i-akhawunti yakho ye-Google nedivayisi yakho
Uma une-smartphone noma ithebhulethi enesistimu yokusebenza ye-Android, into ejwayelekile kakhulu ukuthi une-akhawunti ye-Google evumelanisiwe, ngoba i-giant search ikuphoqa ukuthi wenze njalo, kodwa ngeke kwanele ukuthi uyibuyekeze, ikakhulukazi uma awukalahleki noma i-terminal yakho yebiwe.
Ukuze uqiniseke ukuthi unayo leyo akhawunti ye-Google evumelanisiwe Ungafinyelela imenyu "Yezilungiselelo" zedivayisi bese uyihlola ku- "Akhawunti". Njengoba ukwazi ukubona esithombeni esilandelayo, i-akhawunti yakho yakwa-Google kufanele ivele ngendlela efanayo.
Finyelela iwebhusayithi yeSiphathi Sedivayisi ye-Android
Isiphathi Sedivayisi ye-Android Noma okufanayo, umphathi wedivayisi we-Android uzosivumela ukuthi sibeke i-smartphone noma ithebhulethi yethu ngokunemba okukhulu uma kwenzeka ukuthi ilahlekile noma yebiwe.
Ngaphambi kokungena ngemvume kule webhusayithi iGoogle eyenza itholakale kunoma yimuphi umsebenzisi, kubalulekile ukuthi unake izinto ezimbili ngaphambi kokuqala ukungena ngemvume.
Okokuqala kufanele uqaphele kakhulu futhi hlola ukuthi uzongena ngemvume ekhasini elisemthethweni le-Android Device Manager, futhi ukuthi inethiwekhi yamanethiwekhi igcwele amakhasi alingisa kahle le ye-Google lapho abaduni nabagengebi bafuna ukweba iphasiwedi ye-akhawunti ye-Google yabasebenzisi.
Uma usebenzisa ikhompyutha esesidlangalaleni noma lapho abantu abaningi banokufinyelela khona, sebenzisa iseshini ye-incognito ku-Google Chrome ukuvimbela noma ngubani ozosebenzisa leyo divayisi ukuthi abe nokufinyelela ku-akhawunti yakho ye-Google nendawo yendawo yeselula yakho.
Ukugcina indawo isebenza ku-smartphone yakho kungakusiza
Lapho sesingene ngemvume futhi sizithola sesingaphakathi kohlelo, singathola idivayisi yethu. Itheminali yethu elahlekile izonikeza indawo yayo isebenzisa izimpondo eziseduze ukunxenxa indawo okuyo ngenqubo elula esetshenziswa ezindaweni eziningi zempilo.
Kusetshenziswa kuphela umkhawulo wephutha lendawo ye-smartphone noma yethebhulethi kuzoba phakathi kwamamitha angama-600 kuya kwangu-800. Uma kwenzeka sisebenzise indawo kudivayisi yethu kuzoba ngamamitha angama-20 kuphela ngakho-ke ngeke kube nzima kakhulu ukuthi sikuthole esimweni lapho silahlekelwe khona.
Akungabazeki ukuthi, ngokwesibonelo, ukusetshenziswa kwebhethri ngenkathi kugcinwa indawo kusebenze kuphakeme kakhulu, kepha uma kukhulunywa ngokwazi ukuthola idivayisi yethu kubalulekile ukuthi isebenze. Uma unganakekeli noma uthambekele ekulahlekelweni i-smartphone yakho, ungayidlali futhi njalo ugcine indawo ivuliwe.
Ezinye izinketho ezithakazelisa kakhulu
Isiphathi Sedivayisi ye-Android asigcini ngokusivumela ukuthi sithole idivayisi yethu ephathekayo kepha futhi sisinikeza ezinye izinketho ezintathu ezithakazelisa kakhulu futhi eziwusizo. Sizobabuyekeza ukuze sikwazi ukuzisebenzisa uma kunesidingo.
Uma ulahlekelwe yidivayisi yakho, ngokwesibonelo ekhaya, ungayenza ikhale kusuka ku-Android Device Manager ukuyithola ngokushesha okukhulu. Ngokucindezela le nketho uzothola ifoni ukuthi iqale ukudlala ngevolumu ephezulu imizuzu emihlanu ngaphandle kokuphazamiseka. Ukuphela kwendlela yokuyimisa kungaba ngokucindezela inkinobho yamandla ku-terminal.
Esimweni lapho i-terminal ibiwe inketho enhle kungaba ukuyivimba, okuthile esingakwenza ngenketho yesibili enikezwa yi-Android Device Manager. Ngokwenza le nketho isebenze, isikrini sasekhaya sendabuko sedivayisi yethu sizothathelwa indawo ngephasiwedi, esizokukhetha yona. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka futhi ukwengeza umyalezo futhi ngokwesibonelo ikheli lapho isela noma noma ngubani othole idivayisi angalishiya khona azolithatha ngokushesha okukhulu.
Uma i-smartphone yakho yebiwe, ungahlala ushiya umyalezo osabisayo ongayithola ngayo, yize ngesaba ukuthi ngeke yenze okuningi.
Uma kungekho okukhethwa kukho okungenhla okusizile ekutholeni idivayisi yakho noma ukuyibuyisela kuwe, manje isikhathi sokuba sula idivayisi ukuze kungabikho muntu ongathola idatha yethu ebalulekile, ngezithombe zethu eziyimfihlo noma nganoma iyiphi ividiyo ebekiwe okungenzeka siyigcinile.
Khumbula ukuthi le nketho iyindlela yokuphelelwa yithemba nokuthi uma unquma ukusula idivayisi yakho awusoze wakwazi ukuthola nganoma iyiphi indlela idatha owawuyigcine kuyo.
Enye inketho; thola i-smartphone yakho kusuka ku-akhawunti yakho yakwa-Google
Ekugcineni, sizokukhombisa enye indlela yokuthola ifoni yakho uma ilahlekile noma yebiwe. Ukufinyelela izilungiselelo ze-akhawunti yakho yakwa-Google kusuka kusiphequluli sewebhu, okumele ufinyelele kuso ikheli elilandelayo, singakwazi ukuthola idivayisi yethu.
Lapho usufake iphasiwedi edingekayo, kufanele ukhethe ifayela le- inketho "Thola iselula yakho". Ngemuva kwalokho uzoba nezinketho ezithile ezifanayo kakhulu nalezo ebesinazo ku-Android Device Manager.
Ngabe ukwazile ukuthola noma ukuthola ukubonga nge-smartphone yakho kumathuluzi nezindlela esizenze zatholakala kuwe?.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungayithola kanjani i-smartphone yakho ye-Android uma ilahlekile noma intshontshiwe
Sihlaziya onqenqemeni lwe-Samsung Galaxy S7, ifoni okulula ukuthandana nayo
Ungayibuka kanjani futhi uyilandele bukhoma i-Euro 2016